Madheshvani : The voice of Madhesh - प्रदेश २ को सरकारमा छिट्टै नयाँ टिम आउँदैछ : सांसद सुमन
प्रदेश २ को सरकारमा छिट्टै नयाँ टिम आउँदैछ : सांसद सुमन
मनिष सुमन, प्रदेश २ का सांसद तथा जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य
० कोरोना कहरकै बीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालको चार दिनसम्म केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्यो । तर, कुनै ठोस निष्कर्ष आएन नि ?
— आमजनताको उत्कट इच्छापश्चात् राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण भयो र एकीकृत पार्टीको यो पहिलो ऐतिहासिक बैठक थियो । बैठकको सुरुका दिन परिचयमै सम्पन्न भयो । त्यसपछि विभिन्न प्रस्तावहरुमाथि वृहत छलफलपछि भएका सबै निर्णयहरु महत्वपूर्ण नै छन् । हामीले मंसिर मसान्तसम्म टोल, वडा समितिदेखि लिएर केन्द्रसम्म दुवै पार्टी पूर्णरुपले समायोजन गर्ने, कसरी अनुशासित रहने, पार्टीको आगामी लक्ष्य के हुने, कुन समाजवादमा हामी जाने, वर्तमान सरकारप्रति हाम्रो दृष्टिकोण, नागरिकता, रेशमलाल चौधरी जस्ता सबै कुराहरु बैठकपश्चात् निर्णयहरुमा लेखिएको छ । तसर्थ, बैठकबाट धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिएको छ ।
० अहिले विषम् परिस्थिति छ, तपाइँहरुको सरकार रहेको प्रदेशमा कोरोनाको भयावह हुँदै गइरहेको छ । जिल्लाहरुमा ल्याब छैन, परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन । जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन् भन्ने गुनासोहरु छन् । यस विषयमा कुनै किसिमको निर्णय वा निष्कर्ष देखिएन त ?
— जनता समाजवादी पार्टी पूरै देशको पार्टी हो । कुनै प्रदेशविशेषको मात्रै होइन । यद्यपि त्यो बैठकमै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीजी पनि सदस्य भएको नाताले त्यो विषय पनि उठेको हो । कोरोनाको यो आतंकलाई कसरी रोक्न सक्ने भन्ने कुराहरु नउठेको होइन । यस विषयमा हामीले सल्लाह पनि दिएका हौं । पार्टी निर्णयमा पनि कोभिड–१९ बारे लेखिएको छ । यो कुनै क्षेत्र, गाउँ, बस्ती विशेषको समस्या पनि होइन । हामी नेपाली भएपछि सिंगो नेपालकै बारेमा सोच्नुपर्छ । यसमा सरकारले अलि गम्भीरताका साथ भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो । प्रत्येक घरमा कमसेकम एक पीसीआर टेष्ट गराइनु पर्दथ्यो । संक्रमण समुदायमा फैलिसक्यो ।
० यस्तो महामारीका बेला प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नै देखिएन । मृतक र संक्रमितको तथ्यांक संकलन गर्ने बाहक अन्य केही पनि गर्न सकेन भन्ने गुनासोहरु आइरहँदा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले किन जनतालाई अनुभूत गराउन सकेन भन्ने विषयमा पार्टीले त निर्देशन गर्न सक्थ्यो नि ?
— सबै गुनासोमा मेरो पनि समर्थन छ । हाम्रो पार्टीले पनि प्रदेश २ को सरकारले धेरै राम्रो काम ग¥यो, कुनै गुनासो नै छैन भनेर भनेको छैन । आफैले बनाएको सरकारको गुनासो आफ्नै पार्टीमा गर्ने निकाय होइन । पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति हो । पार्टीले चाह्यो भने कुनै पनि बेला सरकारका पात्रहरु फेर्न सक्छ । पार्टीले आन्तरिकरुपमा प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएकै छ । वास्तवमै प्रदेश सरकारले मृतक र संक्रमितको तथ्यांक संकलन गर्न बाहेक केही खासै गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले भएको बजेटलाई पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रयोग गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले किनेको मेसिनहरु राम्ररी काम गरिरहेको छैन । जनकपुरको मेसिन दिनको दुईचोटि बिग्रिन्छ ।
० आफ्नो सरकारले किन राम्ररी काम गरेन, अबदेखि राम्ररी काम गर भन्ने किसिमको निर्देशन पार्टीबाट जानुपर्ने थियो नि ?
— त्यो कुरो उठेको हो । बैठकमा प्रदेश सरकारले किन राम्ररी काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचारको त्यत्रो ठूलठूलो आरोप तिमीहरुमाथि किन लाग्यो लगायतका कुराहरु आन्तरिकरुपमा उठेको हो । हामीले बैठकको निर्णयमा लेखेको मात्र होइनौं । आन्तरिक निर्देशन पनि दिइएको हो ।
० बैठकबाट दिइएको निर्देशनअनुसार सरकारको काम कारबाहीमा सुधार आएको देख्नुहुन्छ ?
— वास्तवमा अहिलेसम्म सुधार त देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले हामी यो गर्दैछौं, त्यो गर्दैछौं भनेर हामीलाई कन्भिन्स मात्रै गरिरहेको छ । निर्देशन दिइएको करिब एक हप्ता मात्रै भएको छ र परिणामका लागि यो पर्याप्त समय पनि होइन । हेरौं के गर्छ कि । केन्द्रीय सरकारले त झन् निर्देशनात्मक आदेशबाहेक केही गरेकै छैन । जे भएपनि अहिले स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
० विभिन्न अनियमितता, भ्रष्टाचारका बारेमा प्रदेश २ का सरकार बदनाम भइरहेको छ । यस विषयमा पार्टीले निगरानी किन गर्दैन ?
— छुट्टाछुट्टै पार्टी (राजपा र समाजवादी) हुँदा निगरानी नभएको होइन, भएको हो । तत्कालीन राजपाले त महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा समिति नै बनाएको थियो । हाम्रो पार्टी भनेको लोकतन्त्र र विधिमा विश्वास गर्छ । हामी नेकपाजस्तो प्रदेशमा हुकुम चलाउने होइन । हामीले नेकपा जस्तो उदण्डतापूर्ण तरिकाले प्रदेशको नाम र राजधानी यो वा त्यो नै राख भनेर निर्णय गर्दैनौं । प्रदेश सरकार वा प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कुराहरुमा प्रदेशसभा र सरकार निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
० प्रदेश सरकार गठन भएको अढाइ वर्षसम्म पनि जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन्, व्यापक अनियमितता भयो भन्ने गुनासोसहित तपाइँहरुले नै केन्द्रीय नेतृत्वलाई डेलिगेशन दिनुभएको छ नि । यस विषयमा नेतृत्वले निर्णय लिनुपर्दैन ?
— पार्टीको तर्फबाट सांसद भएपछि अनियमितता, आफ्नो गुनासोहरु पार्टी नेतृत्वलाई सुनाउनुपर्छ । आफ्नै सरकारको विरुद्ध सञ्चारमाध्यम वा बाहिर बोल्नुभन्दा पार्टी नेतृत्वमा गएर निवेदन गर्नु लोकतान्त्रिक विधि पनि हो । हामी त्यो विधि अपनाएर पार्टी नेतृत्वलाई प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट, रेडबुक, सरकारविरुद्ध उठेका आवाजहरु, मन्त्रीहरुले गरेका बेथितिपूर्ण कामहरुका बारेमा हामीले पार्टी नेतृत्वलाई अवगत गराएका छौं । पार्टी नेतृत्वले यी कुराहरुलाई गम्भीरताका साथ लिएको पनि छ । हाम्रो पार्टी एकीकरण भयो भन्ने कुरा राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो । एकीकृत पार्टीको संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री हुनेछ भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारणा १८९ मा उल्लेख छ । सोहीअनुसार अब हामी छिट्टै नै संसदीय दलको नयाँ नेता चयन गर्ने र अहिले रहेको संरचना नदेखिन सक्छ । आगामी संरचना अलि जोशिला अनुहार र जसले प्रदेशका लागि केही गर्न सक्दछन् । यो आशाका साथ हामी सबै बसेका छौं । छिट्टै यसको निरुपण हुन्छ ।
० भनेपछि प्रदेश २ को सरकारमा अब नयाँ अनुहारहरु आउँछन् ?
— संसदीय दलकै नेता मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोले नयाँ नेता चयन भएपछि निश्चितरुपमा नयाँ अनुहार आउँछन् । पार्टी एक भएपनि अहिलेसम्म त प्रदेश २ मा हाम्रो दुई जना संसदीय दलका नेता छन् । दल एकीकृत भइसकेपछि एउटा नेता छिट्टै चयन हुन्छ । त्यसैले प्रदेश २ मा अब नयाँ टीम आउँछ ।
० प्रदेश २ सरकारको सम्पूर्ण अनुहार नै परिवर्तन हुन्छ त ?
— मलाई त्यस्तै लाग्छ । अब पूरानो अनुहारलाई नै दोहो¥याउनुभन्दा पार्टीका सबै साथीले मौका पाउनुपर्दछ । तसर्थ नयाँ अनुहारहरु नेतृत्वमा आउँछन् ।
० राजपा र समाजवादीबीच एकताको बेला एकीकृत पार्टीको संघीय संसदमा संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई बनाउने सहमति भएको भन्ने कुराहरु बाहिर आइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
— एकीकरणका बेला संघीय संसदको नेता राजेन्द्र महतोलाई बनाउने कुरा सहमति भएको हामीले पनि सुनेका छौं । एकीकृत हुने बेला म त्यो बैठकमा थिएन । तर सुनेका छौं । हो, वास्तवमा राजेन्द्र महतोजी योग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिइनुपर्छ । सबैथोक सहमतिकै आधारमा हुँदै आइरहेको छ । भविष्यमा पनि सबैथोक सहमतिकै आधारमा हुन्छ ।
० प्रधानमन्त्रीप्रति तपाइँहरुको विज्ञप्तिमा आएको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आपत्ति जनाउनुभएको छ । किन यस्तो आपत्तिजनक कुरा जसपाले आफ्नो विज्ञप्तिमा लेख्यो ?
— जसपाको विज्ञप्तिप्रति प्रधानमन्त्री रिसाउनु, उहाँको तलब खाने प्रेस सल्लाहकार रिसाउनु स्वाभाविकै हो । त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक लिएका होइनौं । जसपाले विज्ञप्तिमा लेखेको शब्दहरु मर्यादित र उचित छन् । साँच्चै नै प्रधानमन्त्री शारिरीकरुपले कमजोर हुनुहुन्छ र मानसिकरुपले पनि कमजोर रहेको कुरो उहाँको व्यवहारबाट देखिन्छ । कसैले भन्न नसकेका हुन्, जसपाले भन्यो, ठिक भनेको छ । यो कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीका आसेपासे रिसाउनु अस्वाभाविक होइन ।
० जसपाले आफ्नो शब्द फिर्ता लिँदैन ?
— कुनै पनि हालतमा हामीले आफ्नो शब्द फिर्ता लिँदैनौं । बरु जोसँग जे हुन्छ त्यसको सामना गर्न तयार छौं ।